ဆွေးနွေးခန်း | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဆွေးနွေးခန်း. Show all posts
ပြည်တော်ပြန် ပညာရေး ဝန်ဆောင်သူတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ် အကဲစမ်းမှု
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အပြောင်း အလဲတွေ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ပြီး တဲ့နောက် ပြည်ပမှာ သွားရောက် ပညာ သင်ကြား ခဲ့သူ အချို့ဟာ အခု အခါမှာ မြန်မာ နိုင်ငံကို ပြန်ပြီး ပညာရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေ ကြပါတယ်။
အဲဒီလို လုပ်ကိုင်ရာမှာ သူတို့တွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို အခက် အခဲ မျိုးတွေ ရင်ဆိုင်နေ ရပါလဲ။ ဒီအခက် အခဲတွေကို ဘယ်လို ကျော်လွှား နိုင်ပါသလဲ ဆိုတာကို ဗွီအိုအေရဲ့ စနေည တိုက်ရိုက် လေလှိုင်း အစီ အစဉ်မှာ
ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့သင်ကြား ပြသမှု ပိုင်းမှာ အရည် အသွေး မြင့်မား လာအောင် သင်တန်းပေးနေသူ Smile Education Training Instituteက မမေပုလဲသွယ်
New York က Bard ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်နဲ့ Yale တက္ကသိုလ် တို့မှာ ပညာ ဆည်းပူးပြီး PHD ဘွဲ့ရသူ ပါရမီ တက္ကသိုလ် ထူထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဒေါက်တာ ကျော်မိုးထွန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ Ramkhamheang University မှာ ပညာရေး ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ ပညာရေး စနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကွန်ရက်- NNER အတွင်းရေးမှုး တဦးဖြစ်တဲ့ မသူသူမာ
Britain Oxford Brooke's university စာရင်းကိုင် ဘာသာရပ် သင်ယူပြီး မြန်မာပြည်မှာ Educomm Accountancy Service သင်တန်း ဖွင့်လှစ် နေတဲ့ မအိအိထွန်း
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က ပညာရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ထဲထဲ ၀င်ဝင် ပါဝင်ပြီး မုဒ်ဦး ပညာရေး အဖွဲ့ အတွက် သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း စာအုပ် ရေးသားနေတဲ့ ကိုအောင်ခိုင်
တို့နဲ့ အတူ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းက ကိုအောင်အောင် တို့ ဆွေးနွေး တင်ဆက် ထားတာကို အသံဖိုင်မှာ အပြည့် အစုံ နားဆင်ပါ။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (အောင်အောင်)
ကဏ္ဍ စကားဝိုင်းများ, ပညာရေး, အသံဖိုင်, ဆွေးနွေးခန်း
သူခုိုးတွေကုို အရေးယူတာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကုို မထိခုိုက် နိုင်ဘူး
အစုိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဟောင်းတွေရဲ့ အဂတိ လုိုက်စားမှု တွေကုို အခြေခံ ဥပဒေပါ နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ရေး ပြဌန်းချက်ကြောင့် အရေး မယူတော့ ဘူးလား၊ အရေး မယူရင် ပြည်သူတွေ ကရော ကျေနပ် ပါ့မလား ဆုိုတာကုို ဧရာဝတီ သတင်းဌာနရဲ့ အင်္ဂလိပ်ပုိုင်း အယ်ဒီတာ ကျော်စွာမုိုး၊ တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်နဲ့ NHK သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းထောက် ကုိုသီဟသွေး တုို့က ဆွေးနွေး ထားကြ တာပါ။
From : irrawaddynews
Originally published at - https://www.youtube.com/channel/UCgEI7TvwuNGVGpd1M0icWJQ
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, စကားဝိုင်းများ, ဆွေးနွေးခန်း
ဒုတိယ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံ အလား အလာ
ဒုတိယ အကျော့ ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကို မေလ တတိယ ပတ်ထဲမှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေ ကြပါပြီ။
ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် တခုလုံး အတွက် ၂၁ ပင်လုံ ညီလာခံ ဒုတိယ အကျော့ အစည်း အဝေး ကနေ ဘယ်လောက် အထိ မျှော်လင့် စရာတွေ ရှိနေ ပါသလဲ။
NCA လက်မှတ်ထိုးသူတွေရော - လက်မှတ် မထိုးကြသေးသူတွေပါ အစုအဖွဲ့ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် တရပ် ဖြစ်လာဖို့ အလား အလာမှာ ဘာတွေ အကဲစမ်းချက် ရှိနေသလဲ၊ ဘာတွေ အလားအလာ ကောင်းနေပါပြီလဲ ဆိုတာကို
မအေးသန္တာကျော်က ပအို့ဝ် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်မြင့်ထွန်း၊ မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူ ဦးမောင်မောင်စိုး၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဟောင်း ဦးရဲထွန်း၊ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ယက်က မခွန်ဂျာတို့ အတူ ဗွီအိုအေ သောတရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးထားတဲ့ စနေ ညပိုင်း တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း အစီ အစဉ်ကို အသံဖိုင်မှာ အပြည့် အစုံ နားဆင်နိုင် ပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (မအေးသန္တာကျော်)
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံမှု အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် တရား ဥပဒေ စိုးရေး စိန်ခေါ်မှုများ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ရဲ့ ပြင်ပမှာ တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် ခံရတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှု အခြေ အနေတွေ၊ ဒီလုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုကို အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်စေဖို့ အတွက် အစိုးရ အနေနဲ့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက် သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်၊ သတင်းစာ ဆရာ စည်သူ အောင်မြင့်တို့က ဆွေးနွေး တင်ဆက် ပေးထား ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/27820/
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Wednesday, February 08, 2017 No comments:
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု တာဝန်ရှိ သူတွေကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ နိုင်မလား?
ကွယ်လွန်သူ တရား လွတ်တော် ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် ခံရမှုမှာ နောက်ကွယ်က ပါဝင် ပတ်သက်တဲ့ အဓိက တာဝန် ရှိသူ တွေကို အမှန်တကယ် ဖော်ထုတ် အရေး ယူနိုင် ပါ့မလား။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေး အခြေ အနေ အပေါ်မှာရော သောတာရှင် တွေရဲ့ အမြင် သဘောထားတွေ ဘယ်လို ရှိကြပါသလဲ ဆိုတာ တွေကို ဥပဒေ အထောက်ကူပြု ကွန်ယက် အဖွဲ့က ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်ထူး၊ ညီမျှခြင်း မြန်မာ အဖွဲ့ စတင် တည်ထောင်သူ ဦးအောင်မျိုးမင်း တို့နဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က ဆွေးနွေး တင်ပြ ထားပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (ဇော်ဝင်းလှိုင်)
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Sunday, February 05, 2017 No comments: